Güell प्यालेस यात्रा समाचार
छवि | स्पेनमा खुशी छ
बार्सिलोनामा हामी एन्टोनियो गौडेको विरासतको राम्रो अंश पाउँछौं, स्पेनका एक महत्त्वपूर्ण आधुनिकतावादी आर्किटेक्ट। हामीलाई थाहा छ ला पेड्रेरा, पार्क जेल, सगरडा फामिलिया, कासा बाटली र अझै, कलाकारको पहिलो ठूलो कामको बावजुद, पालासिओ जेल सबैभन्दा कम लोकप्रिय हो।
एन्टोनियो गौडिको बार्सिलोना हुँदै आधुनिकतावादी मार्गमा तपाईंले यस सुन्दर भवनलाई समावेश गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंले यसबारे पहिले कहिल्यै सुनेका हुनुहुन्न भने, अर्को पोस्टमा हामी पलासिओ जेलको ईतिहासको समीक्षा गर्दछौं।
1 गोयल प्यालेसको इतिहास
2 गोयल प्यालेस कस्तो छ?
4 टिकट किन्नुहोस्
गोयल प्यालेसको इतिहास
छवि | बार्सिलोना को लागी यात्रा
Nou de la Rambla सडकमा अवस्थित छ, नम्बर -3--5, गाउल प्यालेस १ th औं शताब्दीको अन्तमा शहरका रावलको मुटुमा रहेको घर र सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा उद्योगपति युसेबी गोयलको आयोगले निर्माण गरेको थियो। त्यस समयमा व्यापारीले बार्सिलोनाको बाहिरी इलाकामा पहिले नै एउटा घरको स्वामित्व लिएका थिए जहाँ पूँजीपति वर्ग प्रायः बसोबास गर्थे, तर उनी पनि कासा गोयल (पैतृक परिवारको स्वामित्वमा रहेको) नजिकैको केन्द्रमा रहेको चाहन्थे र क्याटालान आर्किटेक्ट छनौट गर्न रोजे। आफ्नो विचार को आकार
युसेबी गोल १ 1910 १० सम्म यस ठाउँमा बसोबास गर्थे र ठूला पार्टी र रिसेप्शनहरू पनि दिन्थे जस्तो विश्वव्यापी प्रदर्शनी। त्यसपछि उनी पार्क जेलको कासा लारार्डमा बसाई सरे र उनकी छोरी मर्से १ 1945 .XNUMX सम्म पलाउमा बस्थे। त्यही वर्ष धनी अमेरिकीले गौडाको काम देखेर छक्क परे र त्यो ढु by्गाले आफ्नो देशको लागि ढु palace्गा लिन महल किन्ने प्रयास गरे। यद्यपि, मर्का गोयलले यसलाई बार्सिलोना प्रान्तीय परिषदलाई जीवन पेन्सन र भवनलाई सांस्कृतिक उद्देश्यका लागि सुरक्षित राख्नको लागि बदल्न दान गरे।
यसको निर्माणको लागि, एन्टोनियो गौडीले उनीसँग उपलब्ध सबैभन्दा उत्तम सामग्री प्रयोग गरे र त्यो वास्तबिक आर्किटेक्ट फ्रान्सिस बेरेनगुइर जस्ता सबैभन्दा उत्कृष्ट पेशेवरहरू र कलाकारहरूको सहयोगमा गणना गरे।
कार्य सञ्चालन गर्दा गौडाले सामना गर्नुपरेको एउटा वास्तुगत चुनौती भनेको रावल सडकमा ठाउँ र प्राकृतिक बत्ती प्राप्त गर्नु सजिलो थिएन।, तर वास्तुकारले प्रकाश र सतहको नयाँ अवधारणासँग कसरी खेल्ने भनेर जान्दछन्, उनीले बनाएका सजावटका तत्वहरूले भरिएको अनौठो वातावरण, जस्तो कि उसको प्रसिद्ध टे्रन्काड्स (सिरेमिक टुक्राको मोजेक) छत चिमनीमा।
गोयल प्यालेस कस्तो छ?
छवि | गौड पोर्टल
गोल प्यालेसको भ्रमणको दौडान हामी देख्न सक्छौं कि आन्तरिक रिक्त स्थान कसरी केन्द्रिय हलको वरिपरि घुम्छ, जुन आकाशीय सम्झनासहितको गुम्बजले ढाकिएको थियो र तीन तलाहरू। दरबारमा बाँकी कोठाहरू यसको वरिपरि कार्यात्मक तरिकाले वितरित हुन्छन्, साइटमा साना ठाउँको अधिकतम बनाउन, परिदृश्यसँग खेल्दा विशालताको भावना दिन्छ।
त्यस्तै, गौडीले केन्द्रीय हललाई कन्सर्ट हलको रूपमा कल्पना गर्‍यो जहाँ गोयल परिवारले संगीतको मजा लिन सक्दछन्, जुन उनीहरूको एक ठूलो आवेश हो। डोमले अ the्गका लागि लाउडस्पीकरको रूपमा काम गर्दछ, जसको मूल काठको पाइपहरू पुनःभण्डारण गरियो। हरेक आधा घण्टामा, आगन्तुकहरूले अन्तरिक्षको राम्रो ध्वनिकी देख्न सक्दछन् किनभने यसले संगीत प्यालहरू खेल्छ जुन पेलेसका बासिन्दाहरूलाई सबैभन्दा मनपर्दछ।
केन्द्रीय हलको अघिल्लो कोठालाई हराएको चरणहरू कोठा भनेर चिनिन्छ, खाली ठाउँहरू मध्ये एक जहाँ यो अधिक स्पष्ट छ कि वास्तुकारले आफ्नो कल्पनालाई सानो क्षेत्र विस्तार गर्न प्रयोग गर्नुपर्‍यो। दरबारको अर्को धेरै रोचक क्षेत्र धुम्रपान वा विश्राम कोठा हो।
छत गोल प्यालेसको सबैभन्दा विचित्र ठाउँ हो किनकि यसको square०० वर्ग मिटर रंगीन सिरेमिकले ढाकिएको प्रभावशाली फायरप्लेसहरूद्वारा सजाइएको छ। अर्को तर्फ, अस्तबल तहखाने मा अवस्थित छन्, एक धेरै अद्वितीय स्थान।
छवि | पागल जस्तै यात्रा
गोयल प्यालेस मंगलबारदेखि आइतवारसम्म खुला छ। गर्मीमा (अप्रिल १ अक्टुबर 1१) घण्टा बिहान १० देखि साँझ 31 सम्मको हुन्छ। टिकट कार्यालयहरू बिहान :10:०० बजे बन्द छ। जाडोमा (नोभेम्बर १ देखि मार्च 20१) घण्टा १० बिहानको हुन्छ। बिहान :19: at० Ticket::00० बजे टिकट अफिसहरू बन्द हुन्छन्।
यो जान्नु राम्रो हो तपाईं G Pell प्यालेस प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतवारमा निःशुल्क प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटहरू दुई शिफ्टमा समाप्त नभएसम्म वितरण गरिन्छ: पहिलो बिहान १० बिहान। र दोस्रो दिउँसो १::10० बजे।
भ्रमणको बखत, अडियो-गाईडले एन्टोनियो गौडीको ब्रह्माण्डमा आगन्तुकहरूको परिचय गराउँदछ, यस स्थानको इतिहास र प्रत्येक विवरणको कारण वर्णन गर्दछ। यो एउटा भ्रमण हो जसले एन्टोनियो गौडी र उसको पछिको कामको शुरुआत राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
टिकट आधिकारिक वेबसाइट मार्फत र गोल प्यालेस टिकट अफिसहरूमा किन्न सकिन्छ जुन भवनको मुख्य प्रवेशद्वारबाट केही मिटर भित्र Calle Nou de la Rambla नम्बर १ मा अवस्थित छन्। सामान्य दर १२ यूरो हो। सेवानिवृत्त हुनेहरूलेeयूरो र १। बर्ष मुनिकाले those यूरो तिर्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » बार्सिलोना » गेल प्यालेस